Ukwenza ulusu lubonakale luhle, luyimpilo, ewe, kubalulekile ukubashiya iimveliso zorhwebo eziqukethe inani elikhulu leekhemikhali, kwaye, nangona kuthengiswa kweentengiso, aziboneleli ngokwaneleyo ukunakekelwa kweso. Ulusu lwethu luvelele kwimiphumo eyahlukileyo, ngoko ke ulusu kufuneka luhlolwe ngenyameko. Ifuna ukuhlanjululwa okuqhubekayo, kwaye akukho okwaneleyo ukuhlamba kunye nokunyuka. Indlela efanelekileyo kukuba uguqulwe kubaqeqeshi, kodwa akusiyo wonke umntu onokukwazi ukuwufumana, ngoko akufanele uyilibale malunga nemiski yobuso bokuhlanjululwa kwemvelo. Siletha iiresiphi zemvelo kunye ezilula kwiitrosi, okusanhlamvu, iziqhamo, eziza kuhlambulula kwaye zivuselele isikhumba kwaye ziyiqule ngezinto eziyimfuneko. Imaski yobuso bokuhlanjululwa kwemvelo, sifunda kule ncwadi. Imeko yesikhumba ixhomekeka kwimpilo yezitho zangaphakathi, kwaye ukuba uhlambulula rhoqo isibindi kunye namathumbu, yidle kakuhle, ngoko entwasahlobo akuyi kuba nzima ukuba ubuyele umbala omhle oye waphuma ngenxa yokuntuleka kwe-vitamin D3 kunye nelanga.
Ubisi ukotyiwe ngobisi
Ukuba ulusu luvulekile kwaye lube ludaka, kufuneka uhlambe imihla ngemihla nge-ukhilimu omuncu, i-yezhenka okanye i-kefir. Siza kubeka umveliso wobisi obomuncu ebusweni, njengoko sisebenzisa ukhilimu oqhelekileyo, siya kushiya imitha ethile, kwaye siza kuhlamba ngamanzi afudumele. I-Lactic acid ikhuthaza ukukhutshwa kweeseli zesikhumba ezifile.
Ngombala omhle, yenza imaski ehlaziya kunye nebhanana. Ukwenza oku, qhasela ibhanana elivuthiweyo kwisitya kwaye usebenzise le maski entanyeni kunye nobuso imizuzu emi-5. Ingabandakanyi indawo ecaleni kwamehlo. Emva kokuhlamba i-mask ngamanzi afudumele kwaye ucoce ubuso bakho ngehawula.
Ngesikhumba esomileyo nesivuthiweyo, i-lotion eneoli ye-rose ifanelekile. Sixuba i-cream cream kunye namaconsi ama-2 eoli ye-geranium kunye neoli ebomvu ebalulekileyo. Ukunyakaza kwe-Setyhula kwimilo ebusweni, isetyenziselwa ukususa i-makeup ecaleni kwamehlo. Ukuvumba kwale mxube kuyamangalisa.
Ukutshiza kususa ukungcola kwangaphandle, igrisi, i-remains of cosmetics, ayimise kwaye ihlambulule isikhumba. Kule nto ufuna:
½ indebe yomhlaba oatmeal,
30 amagremu omlambo omhlaba,
50 amagremu enhlabathini yelanga,
1 ithisipuni yomthamo womhlaba, i-lavender okanye i-pink petals, i-rosemary,
i-cream cream okanye ubisi, amanzi
Hlanganisa zonke izithako kwisitya kwaye uzifake kwisitya, usifake nge-lid. Sigcina le mxube ngeenyanga eziliqela. Ngethuba eli-1, iipunipoyi ezi-2 ze-scrub ziyakwanela, esizihlambulula ngamanzi (kwesikhumba somnxeba), ukhilimu ococekileyo (kwesikhumba esomileyo) okanye ubisi (ulusu oluqhelekileyo), ukufumana ukudibanisa okufanayo. Yeka ukutshiza imizuzu emi-2 ukuze utyhale, uze ufake intamo kunye nobuso, uze usihlambele isikhumba kwisicetyhula. Emva koko, smyem.
Ukucoca ubuso obusweni obusenziwa kwi-oatmeal
Thatha ingilazi e-1 ye-oatmeal echotshoziweyo, engeza i-1 teaspoon yetyuwa kwaye uhlambe ngamanzi afudumele. I-gruel ephumela ekubeni ifana ne-ukhilimu omuncu. Siza kufaka i-mask entanyeni nasebusweni, sihlaziye ngobumnene ulusu. Xa siziva ukuba iislayidi ezininzi zilula phezu kwesikhumba, siya kuhlamba ngamanzi apholileyo.
Ukucoca i-Cuck Mask
Siza kucoca ikhukhamba yobukhulu obuphakathi, sixolele kwaye sixube kunye neproteinyini ehlanjulweyo. Siza kufaka imaski efunyenweyo kumntu malunga nemizuzu eyi-10, siya kuhlamba ngamanzi apholileyo. I-mask i-tons kakuhle ikhumba, kwaye ihlambulule.
Imaski yokutya yokuhlambulula isikhumba
Hlanganisa ithispoon 1 ye-cranberry okanye ijusi ye-lemon nge-20 grams yemvubelo. Okanye ubeke endaweni yelisi ngamanzi afudumele. Siza kubeka le mask imizuzu eyi-15, uhlambe ngamanzi afudumele kwaye usebenzise ukhilimu oqhelekileyo. Ukuba ulusu lubomvu, asiyi kuthuka, konke kwenzeka ngenxa yokujikeleza kwegazi kunye neenkqubo zokuxilisa kwesikhumba.
Ukucoca imaski ye-sauerkraut
I-Sauerkraut siza kubeka ebusweni uluhlu olufanayo imizuzu engama-20. Emva kolu xeshanye, susa ngokucophelela imaski, i-swab, eyayixutywe ngaphambili ngamanzi abilisiwe. I-mask ihlambulula, inondla ulusu ngamavithamini F noC.
Ukucoca imaski yesikhumba esineqhwaba, esinamafutha
Siza kuquba kwisiqwenga esingqongqo isiqwenga samnyama kwaye sizalise ngamanzi abilayo. Xa isinkwa sitshintshile, siya kuhlamba kunye nale gruel efudumele, njengesepha, ngoko siza kuhlamba i-remains kunye namanzi apholileyo.
Ukucoca ubuso obunobumba nodongwe
Kuhlobo oluthile lomntu unokwenza udongwe lwakho. Udongwe olumnyama lufanelekile nasiphi na isikhumba, ukudibanisa kunye nolusu oluqhelekileyo, udongwe olubomvu lufanelekile, ngenxa yenkxwaleko kunye neoli eluhlaza, eluhlaza, emhlophe, nobumba obomvu. Ukuba ulusu lube lukhuni okanye lome, ke kufuneka usebenzise udongwe obomvu, kwaye ubumba obumnyama obushushu besikhumba bufanelekile.
Ayifuni izakhono ezizodwa ukulungiselela isisk kwidongwe e-cosmetic, unciphisa inani elifunekayo le-powder ngamanzi ahlambulukileyo, ukuxinwa kwekhilimu enomuncu, kubangele ubuninzi bekhilimu omuncu, ukuya kwinqununu efanayo. Imaski isetyenziswe ebusweni malunga nemizuzu eyi-10 okanye-12, ngoko siya kuhlamba ngamanzi afudumele kwaye sisebenzise ukhilimu ophuculisayo.
Ukucoca iimaski zobuso be-oatmeal
Ukwenza i-mush, uyityebile ngamanzi abilayo, isipuni esingu-1 se-flakes uze ubaphelise. Ukuba ulusu ludibaniswe okanye luhlaza, kongeza i-1 ithispoon yerayisi yemonisi kwi-mush. I-mask iya kusetyenziswa ebusweni malunga nemizuzu eyi-15 okanye engama-20. Ukuba ulusu lumile okanye aluqhelekanga, ungafaki amanzi kwi-gruel, kodwa uguqula ubisi. Unokongeza i-bhotela okanye i-oli, i-yolk, i-pulp okanye i-bananas ukuya kwi-oatmeal, kwaye i-mask iya kuhlambulula, kodwa isondlo kunye nokunyusa.
Ukucoca ubuso obushushu kunye nomgubo
Kulula ukuyilungisa nokusebenzisa umququ wombuso wokuhlambulula ngomgubo: ukolweni, iitatata, i-buckwheat, i-oatmeal, ilayisi. Umgubo uhlanjululwa ngamanzi, njengobumba. Siza kufaka ubunzima obufumene ubuso, emva kwemizuzu eyi-15 siya kuhlamba.
Ngokuxhomekeka kwimibala yesikhumba ukuze igule, songeza izithako ezahlukeneyo: kwesikhumba esomileyo, i-oatmeal ayihlanjululwa kungekhona ngamanzi, kodwa ubisi, ukongeza ukhilimu, ukhilimu omuncu, i-yolk, ibhotela. Ngesikhumba esinamafutha sithatha umgubo welayisi, ingqolowa okanye amazambane, yongeza i-yogurt, i-kefir, i-juice yenyamatato entsha, ikhukhamba, i-lemon, i-egg emhlophe.
Ukucoca ubuso obusweni bemifuno
Naluphi na ulusu, ukunyuka kunye neentambo ze-rose petals okanye i-rosehips, amaqabunga ama-mint, i-chamomile, umbala we-lime afanelekile. Ngesikhumba somnxeba kunye nendibaniselwano, i-tinctures okanye i-decoction ye-calendula, i-sage, i-wort yase-St. John, i-horsetail, i-yarrow, umama kunye nomama wesibini kunye nokunye.
Sithatha isityalo esinye okanye sityalo, sithatha ingca ngokulinganayo. Ukufumana impembelelo engcono, utshani buhlanjululwe kwi-grinder okanye i-triturated ukwenza i powder. Emva koko iipunifo ezi-2 zepowder siya kuzalisa ½ iglasi yamanzi abilisiwe, siyakugubungela kwaye sifaka imizuzu eyi-15. Iityuwa zamanzi, kunye nomxube we-herbal usetyenziswa kwifom efudumele ebusweni kwaye ubambe imizuzu eyi-15 okanye engama-20.
Ukuhlambulula iimaski ezivela kwimveliso ebusweni
Iimpawu zokucoca ezilungileyo zivela kwimveliso esekhaya.
Dice amazambane ahlambulukileyo kwaye udibanise i-teaspoon ye-honey, i-egg white, ityhula encinane, xuba, ubheke ubuso bakho, ubambe imizuzu eyi-15, uhlambe ngamanzi apholileyo. Le maski yesikhumba seoli.
Hollywood Mask Meat Mask
I-vzobem yefloyi kunye neprotheni, de kube sithobe i-foam, i-namazhem ebusweni kwaye sihambe imizuzu eyi-15. Xa i-mask isomile, siyisusa nge-napkin emanzi, hlamba ubuso ngokutshisa, ngoko ngamanzi abandayo. Emva kwe-mask, i-gloss iya kutshabalala kwaye ulusu luya kuba yinkxaso.
Ikhumba elomileyo lihlanjululwe kakuhle nge-mask-shell shell
Kuthatha ixesha ukupheka: siza kubilisa iqanda, some igobolondo uze uyichoboze ibe ngumgubo, faka i-1punipoon ye-cottage shizi kunye ne-ukhilimu omuncu ukuze ufumane umxube obunzima. I-mask iya kusetyenziswa ebusweni imizuzu eyi-15 kwaye iya kuhlamba ngamanzi afudumeleyo. Ukuba songeza isiqingatha sepunipoon ye-semolina kumxube, umphumo wokuhlambulula uya kuba namandla.
Isiqu seSpain , sondla, sihlambulule kwaye sitshintshisa isikhumba esincinci nesomileyo.
Idilesi 1 inkomishi yeembotyi, ubambe phambi kweeyure ezi-2 okanye ezintathu. Yisuse itshisa kwisihlunu, kwaye udibanise ne-1 isipuni seoli yeoli kunye nejusi enesiqingatha semon. Umxube kwifom efudumele isetyenziswe ebusweni imizuzu eyi-15.
Isiqu seSweden kunaluphi na ulusu
Thatha iipaspuni ezi-3 ze-cottage cheese esitsha kwaye uhlambe i-1 teaspoon yobusi, u-vzobem uze ubeke ubuso, uhlanganise kunye nobunqamle obujikeleze amehlo kunye nomlomo. Gcina imizuzu engama-20, kwaye uthathe ubisi obanda kubomvu ngekotoni. Le maski yenziwe xa ungekho ukuthambekela kokukhahlela.
Amasks kunye nekottage shiese ahlambe ikhumba
Isihlamba esihle sokuhlanjululwa sitholakala kwipilisi ye-hydroperite kunye ne-1 isipuni se-cottage cheese. Ithebhulethi iya kuthungulwa ibe ngumgubo, ixutywe ne-cottage shizi, sibeka i-gruel ebusweni, emva kwemizuzu engama-30 siya kuhlamba ngamanzi afudumele.
I-Mask kunye ne-cream edlayo kunye namaqanda abamhlophe asetyenziswa kwilusu emva kokuhlamba kwe-steam okanye i-compress. Kula maqanda abamhlophe, kongeza i-teaspoon ye-krafini, xuba kunye nokufaka imizuzu engama-20 ebusweni.
Umaski waseParis we-sauerkraut
Phantse 200 amagremu eklabishi agqoke ngobuso bonke, yenza imaski kwindawo ephakamileyo. Emva kwemizuzu engama-20, susa ngokucophelela i-caput uze uhlambe ubuso bakho ngamanzi abandayo. Ulusu emva kwalo mzobo luba matte, olutsha kwaye luyamangalisa lucocekile.
Masks ekuhlambuleni isikhumba kwi-comedones kunye ne-acne
Ukucoca ulusu kwi-acne, sisebenzisa i-mask yaseTibetan
Iipunipo ze-2 ze-calendula iintyatyambo ziya kuzaliswa ngomxube we-30 ml we-cologne, 40 ml wamanzi kunye ne-50 ml yobunxila. Sifaka iintsuku ezimbini kwindawo emnyama. Emva koko bongeza ama-gram e-glycerin kunye ne-5 gram ye-boric acid. Ngalolu hlobo, sihlambulula isikhumba 2 ngamaxesha, ngokukodwa apho kukho i-acne.
Umaski ovela kwisitya ngokucokisekileyo uhlambulula ulusu kunye nama-comedones. Yenziwa 1 okanye 2 amaxesha ngeveki, kwaye iphinda iphindwe izikhathi ezili-10. Iiplums eziphahlayo zixutywa kwi-gruel kwaye zixutywe ne-oatmeal. Lo mxube kunye noqweqwe oluninzi luya kufakelwa kwesikhumba entanyeni kunye nobuso kunye nokuxutywa kwimiyalelo yesaqadi. Imaski ibanjwe imizuzu eyi-15, kwaye ihlanjwe ngamanzi afudumele.
Amaski ahlambulukileyo, unciphisa ama-pores ebuso
Kwinqumpi ye-tomato, kongeza ama-3 okanye ama-4 e-oyile yemifuno kunye nesitashi. Hlanganisa umxube we-15 okanye imizuzu engama-20 ebusweni, obhelelwe ngamanzi abilisiwe. Isiphumo sibonakala emva kweenkqubo ezili-10 okanye ezili-15.
Ikhukhamba i-mask ngeoli yeoli ehlambulukileyo
Ikhukhamba entsha ye-½ siza kuhlamba kwi-grater eplastiki, faka i-1 isipuni yamanzi abilisiwe kunye neoli ye-tablespoons ye-2. Faka isicelo ngomxube we-10 okanye imizuzu engama-12 kwesikhumba, uze uhlambe ubuso ngobushushu bamanzi kwaye usebenzise ukhilimu onondla.
Mask of dill entsha
I-dill entsha iya kucima ii-pores. Icocekile kwaye ixutywe nge-1 teaspoon yeoli yegesi kunye neqanda leqanda. Sibamba imaski imizuzu engama-25 kwaye siyihlambe ngamanzi afudumeleyo.
Ukwandisa umphumo wokunciphisa ama-pores, sisebenzisa ii-oyile ezibalulekileyo kumxube, umzekelo, ioli lemon, i-mandarin, i-mint, i-rosemary. Imixube ngamafutha asetyenziswa kwesikhumba emva kweemaski.
Ngoku siyazi indlela yokulungiselela ukuhlanjululwa kwemvelo. Sithemba ukuba uyayithanda le maski yemvelo. Sikunqwenela uboya obuhle, kwaye awunakuze usebenzise izimonyo.
Iimfihlelo zentle, enempilo yesikhumba
Ukunyamekela ubuso kunye nemveliso yokunyamekela
Masks ebusweni: unyango lwe-comedones ekhaya
I-Curd ne-apple pie
Iitroletti ezinamafutha athengisa i-cottage cheese
Ikhekhelethi ye-chocolate nge-mint liqueur
Ungayincoma njani intanda yakho ukususela ngoFebruwari 14?
Isidlo esinomdla yonke imihla - i-pancake nelayisi, zokupheka kunye neefoto
Ukukhipha isisu - ukupheliswa kwezonyango zokukhulelwa
I-Biography Pelevin, iinkalo ezithakazelisayo zobomi
Abeendaba bafunda igama elitsha likaLyudmila Putina